विश्वकै छोटो बैवाहिक जीवन, बिवाह भएको जग्गेबाटै सम्ब’न्ध बि’च्छे’द, चकित पार्ने यस्तो छ कारण! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > विश्वकै छोटो बैवाहिक जीवन, बिवाह भएको जग्गेबाटै सम्ब’न्ध बि’च्छे’द, चकित पार्ने यस्तो छ कारण!
admin October 2, 2020 Uncategorized	0
एजेन्सी । पूर्वीय समाजमा विवाहको विशेष महत्व छ । यो मृ त्यु पर्यन्त रहने सम्बन्धको रुपमा अभ्यास हुने गरेको छ । तर एक जोडीको १५ मिनेटमा नै विवाह टु’टेको छ । वास्तवमा दुबईमा भएको एक विवाहको बारेमा हाल निकै चर्चा भएको छ, जहाँ विवाह भएको १५ मिनेटमा सम्बन्ध टु’टेको छ । विवाह तय भएपछि दुलाहा र दुलहीको पिताको बीचमा पैसालाई लिएर एक सम्झौता भएको थियो ।
विवाह पछि दुलाहा पक्षलाई दुलही पक्षले एक लाख दिरहम दिने बाचा गरेका थिए । दुलाहाले केटीको बाबुसँग रकम किस्तामा मागेका थिए । विवाहको दिन ५० हजार र बाकी विवाह पछि दिने भनिएको थियो । गल्फ न्यूजका अनुसार केटालाई कटीको बाबुले पहिलो किस्ता अदालतमा नै दिएका थिए । तर विवाह पछि सबै परिवारको साथमा केटीको बाबुले दुलाहासँग बाहिर निस्किएर ५० हजार दिरहम मागे ।
दुलाहाले आफुले पैसा कार भित्र राखेको बताउँदै केहि समयमा दिन्छु भने । केटीका बाबुले दुलाहाकोे कुरा नसुनी एकोहोरो अहिल्यै नै चाहियो भन्न थाले ।केटीको बाबुको यस्तो कुरा सुनेर दुलाहा तुरुन्त अदालतमा पुगे । वकिलसँग कुुरा गरेर भर्खर विवाह भएको पत्नीसँग सम्ब’न्ध वि’च्छे’द गरे ।
दुलाहालाई सबैले सम्झाउन धेरै कोशिश गरेपनि दुलाहा मानेनन्, उनले आफ्नो बे इ ज त भैसकेको भन्दै फेरि विवाह गरेर दोस्रो पटक गल्ती नगर्ने अडान कसे । यो विवाहलाई मानिसहरुले धेरै दृष्टिकोणबाट हेरेका छन् कसैले त यो दुनियाकै सबैभन्दा छोटो भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
एक विवाहको बारेमा हाल निकै चर्चा भएको छ, जहाँ विवाह भएको पल लगत्तै समय वित्न नपाउँदै दुलाहीका बाउले यस्तो नीच हर्कत गरेपछि तुरून्त आफुले सम्बन्ध विच्छेदबारे निर्णय लिएकाे जनाएका छन् । सांकेतिक तस्वीर
झापामा स्कुटर दुर्घटनामा २७ बर्षिया रम्ता श्रेष्ठकाे दुःखद मृत्य! #RIP लेखेर शेयर गराैं